AmaNgqina KaYehova Anceda Amabanjwa Amazi UThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iban Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNgesi IsiNorway IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTatar IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiValencian IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
Suku ngalunye, amabanjwa akwiindawo zokulungisa izimilo zabantu abhalela iiofisi zamaNgqina kaYehova, ecela ukufundiswa iBhayibhile.
Siye sibaphendule ngokucela amaNgqina akumabandla akufutshane ukuba aye kufunda iBhayibhile nabo bantu basezintolongweni, kwizibhedlele zikarhulumente, kwiindawo zolutsha nakwezabo basebenzisa kakubi iziyobisi.
Kwezinye iijele, veki nganye amaNgqina aqhuba iintlanganiso. Ngokomzekelo, kwintetho yesidlangalala eyanikelwa kwezinye iijele ezimbini kwakukho abantu abayi-32.
Iyakhuthaza indlela awangenelwa ngayo loo mabanjwa. Enye indoda eyagwetyelwa ukuhlala ubomi bayo bonke kwintolongo yaseIndiana ngenxa yokubulala, yabutshintsha ubuntu bayo yaza yabhaptizwa, yaba liNgqina likaYehova.
INgqina elalifunda iBhayibhile nelinye ibanjwa elalikwisakhiwo esikhulu sabantu abaze kulungiswa izimilo eCalifornia lithi: “ Ndiyamazi ukuba ebenjani ngaphambi kokuba sifunde yaye ndiyayibona indlela atshintshe ngayo. Utshintshe ngendlela engathethekiyo ukuze afanelekele ukubhaptizwa. ”
Amabanjwa amaninzi sele eqalile ukuphila ngemithetho yeBhayibhile, nangona esazi ukuba oko kunokubeka ubomi bawo engozini. Ngokomzekelo, abaninzi kwabo baye bahlukana nemigulukudu kuye kwafuneka baye kuhlaliswa bodwa okanye bafuduselwe kwezinye iindawo ukuze bakhuseleke.
Indlela iBhayibhile enamandla ngayo okutshintsha ubomi babantu iye yazichukumisa iintliziyo zamagosa asejele. Amanye aye anika amaNgqina amaphepha aqinisekisa indlela awaxabisa ngayo neembasa ngenxa yokuzinikela kwawo kumsebenzi omhle awenze kwezi ndawo.
Ukutshintsha Ubomi Bamabanjwa